Home Wararka Xisbiyada Siyaada Somaliland oo kulan La qaatay goobjoogayaasha Caalamiga ee Doorashada
Xisbiyada Siyaada Somaliland oo kulan La qaatay goobjoogayaasha Caalamiga ee Doorashada
Hoggaanka sare ee saddexda xisbi qaran ee Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay Wafdi isugu jira Safiirro iyo Diblomaasiyiin ka socday dalalka beesha Caalamka, gaar ahaana wadamadda Somaliland ka taageera dimuqraadiyadda oo dalka u yimid arrimaha doorashooyinka isku sidkan.
Wafdigaan ka socday saaxiibada Somaliland waxay kala yihiin Wufuud ka socotay 9 dawladood iyo 9 Danjire, kuwaas oo ay wehelinayaan Diblomaasiyiin sar sare si ay ugu kuurgalaan arrimaha doorashooyinka Somaliland ee qabsoomaya 31-ka bishan May.
Xubno ka tirsan Danjirayaasha oo halkaas ka hadlay ayaa si qoto dheer uga sheekeysannay habsami u socodka doorashooyinka isku sidkan, u diyaar garowga kama dambeysta ah ee socda, kaalinta dunidu ku leedahay doorashada, iyo muhiimadda ay leedahay in saaxiibada Somaliland ay u yimaaddaan dalka iyaga oo dhiirrigelin iyo garab istaag u socda.
Saddexda Xisb Qaran waxay, si wada jir ah dunida ugu caddeeyeen in doorashada qabsoomiddeeda gacmaha la isu qabsaday, si ay innoogu dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, nabad ah isla markaana inoo horseedda horumar iyo isla xisaabtan.
Previous articleRooble oo ku adkeysanaya in gudigii hore doorashada heer gobol sida uu yahay loo dhaafo
Next articleShacabka Somaliland oo maanta u dareeraya doorasho
D. Kenya oo si heer sare ah u soo dhaweysay wafdi...